I-Power Ultrasound ye-Improvement of Juices & AmaSmoothies - Hielscher Ultrasound Technology
Ucwaningo oluvela kwi-Technical University Berlin lathola ukuthi i-ultrasonication iyindlela ephumelelayo yokucubungula ukuthuthukisa ama-fruit nezitshalo zemifino kanye ne-smoothies. Ukuba yindlela yokudla engavamile yokushisa, i-ultrasound inikeza ukwelashwa okuncane kodwa okuphumelelayo okwandisa ama-flavour, futhi kuzinzisa futhi kugcine ama-juice nama-pures. Imiphumela yemithi yokwelashwa kwe-ultrasonic ihlanganisa ukunambitheka okuthuthukisiwe, ukuqiniswa nokulondolozwa.
Ukusetshenziswa kwe-ultrasound ekusebenzeni kwezinqubo zokukhiqiza ukudla kuyinkambu yokwenza isithakazelo esikhulayo kubakhiqizi bokudla. Ngokuphambene ne-low intensity ultrasound (intensities < I-1 W / cm²), esetshenziselwa ukuhlolwa okungonakalisi okulimazayo nokuqagela nge-imaging, amandla e-ultrasound (amandla amakhulu > 5 W / cm²) kubangelwa ukuguqulwa kwezinto ezibonakalayo futhi kungasetshenziselwa ukuthuthukiswa kwezinqubo ezihlukahlukene embonini yokudla. Amagagasi e-Ultrasonic yizimagagasi ezicindezelayo ezisebenzisana nomkhiqizo ngaphansi kwe-sonication. Ukucutshungulwa kwe-cyclic kanye nezinto ezingavamile ezingathinta isakhi sezinhlamvu. Ekucindezelekeni okuphezulu kwe-amplitudes amandla e-ultrasound adala i-cavitation, ukukhula nokufaka implosion ye-bubbles bubbles, ehambisana nokucindezela nokuphakama kwamazinga okushisa kanye ne-homogenizes futhi kuzinzile izinhlelo zokusabalalisa. I-Hielscher Ultrasonics kanye nabacwaningi abavela eMnyangweni Wezokudla Biotechnology kanye ne-Food Process Engineering be-Technical University yaseBerlin baphenye ngemiphumela emihle ye-ultrasound ukuthuthukisa ikhwalithi, ukuzinza nokunambitheka kwe-smoothies; iziphuzo ezihlanganisiwe nezibandayo ezenziwe ngezithelo nezitshalo zemifino nama-pures.
Nakuba kungekho ilungelo elingokomthetho lokunciphisa izithako ze-smoothies emikhiqizweni ehlanzekile nemifino, abakhiqizi bahlose ukubeka emakethe njengemikhiqizo enempilo neyigugu. Ngenxa yalokho, kuhloswe ukuyikhiqiza ngaphandle kokungezwa kokuqiniswa, ukunambitheka kwe-flavor noma amabalabala. Kodwa-ke, ama-juice nama-pures ngokuvamile anezinto eziphezulu ze-pulp. Ngakho-ke, bathambekele ekuhlukaniseni ukuhlukaniswa okubangelwa ukubukeka okungathandeki komkhiqizo. Ngenxa yalesi sizathu, eziningi ze-smoothies ezikhona manje ziqukethe ibhanana njengesithako esikhulu, okunciphisa ukuhlukaniswa kwesigaba ngenxa yokwanda kwe-viscosity.
I-Ultrasound ingasetshenziswa ukuze iphazamise izinhlayiya ze-pulp futhi ithinte ukusabalalisa usayizi wezinhlayiyana. Ubukhulu obuncane bezinhlayiya bubangela ukuhamba okuphansi okuholela ekunciphiseni ukuguguquka nokuqiniswa kokugcina isitoreji. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuhlukaniswa kwezinhlayiyana kungabangela ukukhululwa kwezingxenye zokudla, izinhlayiya zombala kanye namaseli afana noshukela noma amafutha aphefumulayo ejusi. Umphumela uwukuthuthuka kombala, ubumnandi kanye nephunga elimnandi. Ukwengeza, ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana kuthonya umuzwa womlomo, okuholela ekutheni kube nesimo esiphezulu.
Ukuze uqinisekise impilo ethile ye-shelothies, amaxube kufanele asebenze. Kodwa-ke, ukwelapha okushisa njalo kuthinta izinga lomkhiqizo, umbala kanye nomqondo wokuhlanza. Ngenxa yalokho, ukwehliswa kokucubungula izinga lokushisa kungenye yezinto ezisemqoka ekubhekeleni imboni yokudla. I-Ultrasound inomthelela we-synergistic ekusebenziseni kwama-microorganisms nama-enzyme uma isetshenziselwa ukuhlanganiswa nokushisa, okuthiwa i-thermosonication, noma ukucindezela okuphakeme, okubizwa ngokuthi i-manosonication. Imiphumela emihle iyaziwa ngokwengeziwe ngokuhlanganiswa kwayo yonke imingcele emithathu ngaphansi kwe-manothermosonication. Kucatshangwa ukuthi amangqamuzana aphathwa yi-ultrasound angakwazi ukubhekana nezinye izinto ezicindezelayo ezifana nokucindezela nokushisa. Ukwengeza, amagagasi e-ultrsasonic angaphazamisa izingqimba zomngcele futhi enze ukuxuba kubangele ukudluliselwa kokushisa okuthuthukisiwe. Ngakho-ke, okunye okugxilwe kwiphrojekthi yokucwaninga ukunciphisa izinga lokushisa lokushisa ngokuthuthukiswa kwenqubo yokulondolozwa kwe-ultrasound. Ukuthuthukiswa kwekhwalithi yomkhiqizo nokunciphisa izindleko zamandla ngenkathi kugcinwa noma kwandisa ukuphepha komkhiqizo kanye nokuphila kwelanga.
Imiphumela ephelele ye-ultrasound, engavumela ukuthuthukiswa ngesikhathi esisodwa kwezici ze-sedimentation, ukunambitheka, ukubukeka, i-mouthfeel kanye ne-microbiological kanye nokuzinza okunomsoco we-smoothies njengemikhiqizo ephezulu kakhulu, kungabonisa inzuzo ebalulekile embonini yokudla nokukhangisa kwezithelo ezintsha kanye neziphuzo zemifino esikhathini esizayo. Ngaphezu kwalokho, iphesenti yebhanana noma ezinye izithako eziphezulu ze-viscosity zingancipha, lapho ukusimama komkhiqizo kuthuthukiswa yizokwelapha ze-ultrasonic futhi kunikezwe amandla okudala izinhlobo ezintsha ze-smoothie.
Xhumana no-TU Berlin:
Ifoni: +49 (0) 30-3147 1847